कथा : अप्रत्याशित घटना / रेहान खान – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > कथा > कथा : अप्रत्याशित घटना / रेहान खान
आज मेरो कानमा कतैबाट माइकको स्वर गुन्जिरहेको छ । कतै कसैको बिहे रहेछ । तर म, अन्जान मान्छेलाई यो बिहेसित के लिनु ? यो गाउँमा बसेको हप्ता पनि भएको छैन् । धन्य हो कि म, परदेशीलाई अन्धो बाजेले बास बस्न दिनुभयो ।
“बाबु, तिमी जति दिन चाह्यो त्यति दिन बस्न सक्नुहुनेछ ।” बाजेको यो कुराले मलाई यसरी प्रभावित पा¥यो कि मानौँ म कुनै परायाको घरमा होइन आफ्नै परिवारको घरमा बस्न आएको हुँ । सायद दस दिनभित्र मेरो कामकाज सकिनेछ र म राजधानी फर्किनेछु ।
“बाबु ¤ लु यो कार्ड हेरिदिनु त” बाजेले कार्ड हेर्न बोलाउनुहुन्छ । विवाहको निमन्त्रण कार्ड रहेछ । घरको सदस्यमध्ये एक जनाको अनिवार्य उपस्थिति तोकिएको रहेछ ।
“बाबु ¤ मेरो घरमा अरू कोही पनि छैनन् । मलाई बुढेसकालले पनि छोइसक्यो । अर्को कुरो, अन्धोलाई यसमा शोभा पनि दिँदैन । अब उनको कार्डको इज्जत राख्न तपाईं नै जानु ।” बाजेको यस कुराले मलाई दिक्क त लाग्छ तर नकारुँ कसरी ? म आफ्नै सहरिया सुट–बुट लगाएर विवाहतर्फ लम्किन्छु ।
“छोरी त यस्तो छे रे ¤” आइमाईहरू एकअर्कामा कुरा काट्दै भनिराकी छन् ।
“हो नि ¤ दाइजो पनि कम दिएको छ रे ¤”
“साँच्चिकै ¤ ससुरालमा दुर्दशा हुनेछ ।”
यिनीहरूका कुराले मलाई आश्चर्य चकित तुल्याउँछ ।
‘अब दुर्दशा, बिचरी केको ? कसरी ? बिहे भइसकेपछि खुसीसँग एक नयाँ परिवार सृजना गर्छे ।” म योभन्दा बढी सोच्न सक्दिनँ । विवाहको रङ्गीन माहौलमा सामेल हुन्छु । सबले मलाई एकोहोरो भएर हेर्न थाल्छन् । आखिर यो जन्ती हो कि केटीतर्फको ? सब मेरा लागि अन्जान अथवा म सबैका लागि अन्जान…
भोजन सुरु हुँदा म असहज महसुस गर्छु । अलमलिन्छु । दोधारमा पर्छु । किनकि एकातर्फ केटीतर्फबाट भोजन भने अर्कोतर्फ जन्तीहरूका भोजन । म त आएको हुन्छु केटीतर्फबाट नै । तर पनि मलाई आफ्नो पहिचान दिन आफै मन लाग्दैन । तसर्थ चुपचाप म शिर निहुराएर कुनामा बस्छु । “बाबु, खाना खाइयो ?” बेहुलीको बाबाले भनेर जानुहुन्छ ।” “बाबु, खानुभयो ? ” बेहुलाको बाबाले भनेर जानुहुन्छ । उफ् ¤ यसरी पालोपालै सोधिँदा मलाई दिक्क त लाग्छ तर शिर हल्लाएर “हजुर” भन्नु बाहेक अरू के नै गर्न सक्छु र ?
विवाह सम्पन्न हुन्छ । बेहुलीलाई रुँदा–रुँदै बिदा गरिन्छ । सबका गहभरि आँसु देखेर म पनि नाटकीय रूपमा आँसु निकाल्ने प्रयास गर्छु ।
म घर फर्किंदा “बाबु ¤ विवाह कस्तो रह्यो ?” बाजेले सोध्नुहुन्छ ।
“विवाह… अँ विवाह एकदम राम्रो भयो । रमाइलो भयो ।” म यति भन्दै कोठाभित्र छिर्छु ।
दुई दिनपछि मेरो काम सकिन्छ । राजधानी फर्किने निधोमा झोलाभित्र कपडा, सरसामान राख्न थाल्छु ।
बाजेलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन्छु । केही रकमसमेत उहाँलाई दिन खोज्दा उहाँ अस्विकार्दै भन्नुहुन्छ, “बाबु, अतिथि देवो
भवः ¤ तिमीसँग पैसा लिनु पाप हो । ल… राम्ररी जानू ।” म हिँड्न थाल्छु । कि, अचानक मेरो आँखाले मलाई परको भीडतर्फ तान्छ । भीडबाट रोएको, चिच्याएको स्वर सुनिन्छ । भित्र छिर्नासाथ तर्सिन्छु । झस्याङ्ग हुन्छु, छाँगाबाट खसेझैँ । अस्ति बेहुलीको पोसाकमा सजिएर गएकी केटीलाई कात्रोमा पल्टिएको देख्छु । निधारको चोट हातको फोका र चिन्नै नसकिने आगोले डढेको अनुहार हेर्नासाथ मेरो अङ्ग सिरिङ्ग हुन्छ । अप्रत्याशित घटना ¤ अप्रत्याशित घटना ¤¤ महिला विरुद्ध ¤ आखिर किन ? यति म आफैसित भन्दै रिस पोख्न खोज्छु कि । कुनै महिलाले भन्छिन् । “कठै ¤ विचरीलाई दाइजोको निहुँमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइयो ।”
अनायास मलाई सम्झना आउँछ बिहेको दिनको कुरा, जुन दिन यस्तै महिलाले भनेकी थिइन्, “साँच्चिकै ¤ ससुरालमा दुर्दशा हुनेछ ।”
“वास्तवमा दुर्दशाले मृत्युकै सिकार भई, विचरी ।” म पनि खेद प्रकट गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लम्कन्छु । द्घ